क्रिश्चियनका चर्चमा खतरनाक विस्फोट, कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु, डरलाग्दा दृश्य देखिए !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
क्रिश्चियनका चर्चमा खतरनाक विस्फोट, कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु, डरलाग्दा दृश्य देखिए !
काठमाडौं – क्रिश्चियनहरूले चलाइरहेका चर्चमा आईतबार शृंखलाबद्ध विस्फोट हुँदा कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु भएको छ ।
श्रीलंकाका विलासी होटल तथा चर्चमा ईस्टर सर्भिसेजका लागि भेला भएका सयौं भक्तहरू घाइते भएका छन् ।
कोलम्बो राष्ट्रिय अस्पतालका निर्देशक सामिन्दी सामराकूनले कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु र २८० जना घाइते भएको आफूले थाहा पाएको रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताएकी छन् ।
सेन्ट एन्थोनीमा भएको विस्फोटमा कम्तिमा १६० जना घाइते भएको र उनीहरूलाई कोलम्बो राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना गरिएको एक अधिकारीले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बाट्टिकालोसा अस्पतालका एक अधिकारीले एएफपीलाई बताएअनुसार ३०० भन्दा बढी मानिस घाइते भएर अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । श्रीलंकाका एक सांसद हर्षा डी सिल्भाले आफू एक चर्च र एक होटलमा पुगेको र डरलाग्दा दृश्य देखेको बताए ।
‘सबैतिर शरीरका अंगहरू छरिएका थिए । आपतकालीन उद्दारकर्ताहरू घटनास्थलमा उद्धार कार्यमा लागेका छन्,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्वीरमा एउटा चर्चको छत विस्फोटका कारण लगभग उडेको देखिएको छ ।
श्रीलंकामा बौद्ध धर्मावलम्बीको बहुमत छ र त्यहाँ जम्मा ६ प्रतिशत क्याथोलिक धर्मावलम्बी छन् । तर यो धर्ममा तमिल र अन्य अल्पसंख्यक जातीय समूहहरूपनि जोडिएका छन् । घटनाको जिम्मेवारी कसैले लिइसकेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान गरिरहेको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् ।
आफ्नै घरमा ९ सदस्य हुदा ५ भोट पाउने यी हुन् अभागी नेता, रोए ग्वाँ ग्वाँ ! [ भिडियो ]
कांग्रेस किन हार्‍यो ? यस्ता छन् कारण